ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အပေါ် ဘီလီလမင်းအေး အခုလို ပြောပါတယ်...။ - APANNPYAY
Home / Myanmar Idol / အဆိုတော်များ / ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အပေါ် ဘီလီလမင်းအေး အခုလို ပြောပါတယ်...။
ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ အပေါ် ဘီလီလမင်းအေး အခုလို ပြောပါတယ်...။
Apann Pyay 7:42 PM Myanmar Idol , အဆိုတော်များ Edit
ဘီလီလမင်းအေး ဆိုတာ Myanmar Idol Season2ရဲ့ First Runner Up ဆုရှင်တစ်ယောက်အဖြစ် လူသိများပြီး ပရိတ်သတ်အခိုင်အမာ ရှိပြီးသား အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့လို့ လာခဲ့ပါပြီ..။
မကြာခင်ရက်ပိုင်က လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ ဘီလီလမင်းအေး ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတစ်ခု ပျံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယ်...။
ထိုသတင်းအပေါ် ဘီလီလမင်းအေး မှ သူမရဲ့ ဖေ့ဘုတ်ပေ့ခ်ျ စာမျက်နှာကနေ အခုလို တင်ပြထားတာကို တွေ့ရပါတယ်..။
ကျန်းမာ ချမ်းသာကြပါစေလို့ ပထမဦးစွာဖူး ဆုတောင်းပေးပါတယ် ဖူးရဲ့ပရိတ်သတ်ကြီးကို ဖူး အသိပေးစရာလေး ရှိပါတယ် " ဖူး ရုပ်ရှင်မရိုက်ပါဘူးရှင့် " ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖူးရွေးချယ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းမဟုတ်တဲ့အပြင် ဖူးတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရပ် မဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ဖူးကိုအားပေးတဲ့ ချစ်တဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးလည်း Billy-Phoo Phoo Page ကနေ အသိပေးသွားမှာပါရှင့်. အခုလည်း music နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို ချပြနိုင်အောင် ကြိုးစားနေပါလို့ အသိပေးပါရစေရှင့်...."
ဘီလီလမငျးအေး ဆိုတာ Myanmar Idol Season2ရဲ့ First Runner Up ဆုရှငျတဈယောကျအဖွဈ လူသိမြားပွီး ပရိတျသတျအခိုငျအမာ ရှိပွီးသား အနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈခဲ့လို့ လာခဲ့ပါပွီ..။
မကွာခငျရကျပိုငျက လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ ဘီလီလမငျးအေး ရုပျရှငျရိုကျတော့မယျဆိုတဲ့ သတငျးတဈခု ပြံ့နှံ့လာခဲ့ပါတယျ...။
ထိုသတငျးအပျေါ ဘီလီလမငျးအေး မှ သူမရဲ့ ဖဘေု့တျပခြေျ့ စာမကျြနှာကနေ အခုလို တငျပွထားတာကို တှရေ့ပါတယျ..။
ကနျြးမာ ခမျြးသာကွပါစလေို့ ပထမဦးစှာဖူး ဆုတောငျးပေးပါတယျ ဖူးရဲ့ပရိတျသတျကွီးကို ဖူး အသိပေးစရာလေး ရှိပါတယျ " ဖူး ရုပျရှငျမရိုကျပါဘူးရှငျ့ " ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ဖူးရှေးခယျြထားတဲ့ လမျးကွောငျးမဟုတျတဲ့အပွငျ ဖူးတကျကြှမျးတဲ့ပညာရပျ မဟုတျတဲ့အတှကျကွောငျ့ဖွဈပါတယျ ဖူးကိုအားပေးတဲ့ ခဈြတဲ့ ပရိတျသတျကွီးလညျး Billy-Phoo Phoo Page ကနေ အသိပေးသှားမှာပါရှငျ့. အခုလညျး music နဲ့ပတျသကျတဲ့အကွောငျးအရာတှကေို ခပြွနိုငျအောငျ ကွိုးစားနပေါလို့ အသိပေးပါရစရှေငျ့...."